Khangela iiNkampani zeeNdawo eziPhambili zeNtengiso kwi-Intanethi
Real Estate Listings: » Real Estate Agent Directory » Real Estate Consultancy » Khangela iiNkampani zeeNdawo eziPhambili zeNtengiso kwi-Intanethi1
Ngaphandle kokuba ukule ndawo yentengiso yokuthenga enye indlu okanye wonwabele ukubonelela eyakho endala, zimbini izizathu ezithathu ezithi kutheni kufuneka ujongane nobudlelwane benkampani ethengisa izindlu nomhlaba. Ukuqinisekiswa, ukudonsa kubudlelwane benkampani yabarhwebi iindleko zotshintshiselwano kodwa ngaphandle komnyhadala wokuba uthatha umngcwabo kuwo ukusuka kwindawo yokonga imali, uyakufumanisa ukuba iyonke imali oyisebenzisileyo kwimibutho yabo iyimali esetyenziswe kakuhle. Kwelinye, ukuba nobudlelwane be-NYC yeArhente yeNdawo yeRhafu yeNdawo evulekileyo kuwe kuya kuba nakho ukujongana notshintshiselwano kwaye kukutsala ukuba ubeke ixesha elikhulu. Njengoko yonke ingummelwane ngu, kukho izibini zeearhente zabathengisi bezindlu ukuze zilawule. Ucinga ukuba yeyiphi echanekileyo? Inqanaba lokuqala ngokubanzi iya kuba kukuqaqamba kwakho kunye nezihlobo zakho. Kwimeko apho uyazi ukuba umntu othile oqale kade ukufumana okanye uthengise ipropathi, kuya kufuneka ke uye kuye kuloo mntu ngokuzibophelela malunga ne-Real Estate Firm NYC ethe yangena notshintshiselwano. Ukuba akukhange kubenjalo, kuya kuthi emva koko ubenokufuna ukuba wenze olwakho uvavanyo lokutshintsha kobudlelwane ukufumana ingqwalaselo yeepropathi zabo kunye neemfuno zabo. Enye indlela onokulungelelanisa ubume bakho obuqaqambileyo kukuba usekwe kwi-NYC Real Estate Firm ebonisa ukuba nje ufumana okanye uqhubela phambili. Kwimeko apho ujonge ukubonelela ngepropathi yakho, emva koko ubonakale kwinkundla yaseManhattan yeNkulumbuso yeZindlu uQinisekise oko kulawula nje ukupapashwa. Amashishini abarhwebi abanjenge-Oxford Property Group abathi babhekane nezinto ezothusayo zombini ekufumaneni nasekuboneleleni baphinda baphantsi kwemeko yangaphambili yotshintshiselwano. Ngaphambili into engacacanga enokuthatha ingqalelo ibango lakho, khetha i-Manhattan Residence Real Estate Brokerage enomda oqinileyo we-Intanethi. Kwisiseko, ukufumana ubudlelwane beKomishini yePropathi yeNtengiso yePropathi ye-100% kwiNew York akubalulekanga. Ungabonisa ukuthenga kunye nokunikezela ngepropathi ngokwahlulwa. Ngayiphi na imeko, inkanyezi inokunceda ekwenzeni amandla epropathi yakho ukuba ufumane imbuyekezo njengendawo ayithandayo kunye nexesha.
Ibhaliswe kwi 4. Feb 2020
Nxibelelana nentengiso 0702127xxxx
Ibhaliswe kwi February 4, 2020